Bhuku Rechipiri reMakoronike 28:1-27
Ahazi, mambo weJudha (1-4)
Kukundwa neSiriya uye neIsraeri (5-8)
Odhedhi anoyambira Israeri (9-15)
Judha inoninipiswa (16-19)
Kunamata zvidhori kwaAhazi; kufa kwake (20-27)
28 Ahazi+ aiva nemakore 20 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 16 muJerusarema. Haana kuita zvakarurama pamberi paJehovha zvakanga zvaitwa natateguru vake Dhavhidhi.+ 2 Asi akafamba nenzira dzemadzimambo eIsraeri,+ uye akatogadzirawo mifananidzo yesimbi*+ yavanaBhaari. 3 Akakwidzawo utsi hwezvibayiro muBani reMwanakomana waHinomu,* akapisa vanakomana vake mumoto,+ achitevedzera zvinhu zvinosemesa zvaiitwa nemarudzi+ akanga adzingwa naJehovha pamberi pevaIsraeri. 4 Akarambawo achibayira zvibayiro nekukwidza utsi hwezvibayiro panzvimbo+ dzakakwirira, nepazvikomo, nepasi pemiti yese yakasvibirira.+ 5 Saka Mwari wake Jehovha akamuisa muruoko rwamambo weSiriya,+ zvekuti vakamukunda vakatora nhapwa dzakawanda vakaenda nadzo kuDhamasiko.+ Akaiswawo muruoko rwamambo weIsraeri, uyo akauraya vanhu vake vazhinji. 6 Peka+ mwanakomana waRemariya akauraya vanhu 120 000 muJudha zuva rimwe chete, vese vari varume vakashinga, nekuti vakanga vasiya Jehovha Mwari wemadzitateguru avo.+ 7 Uye Zikri, murwi aiva nesimba wekwaEfremu, akauraya Maaseya mwanakomana wamambo naAzrikamu uyo aitungamirira pamuzinda,* naErikana uyo aiva mutevedzeri wamambo. 8 VaIsraeri vakatapawo hama dzavo 200 000, vakadzi, vanakomana, nevanasikana. Vakapambawo zvinhu zvakawanda chaizvo, uye vakaenda nezvinhu zvacho zvavakapamba kuSamariya.+ 9 Asi ikoko kwaiva nemuprofita waJehovha ainzi Odhedhi. Akaenda pamberi peuto rakanga richiuya kuSamariya, akati kwavari: “Inzwai! Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu akaisa vaJudha mumaoko enyu nekuti akanga avatsamwira,+ uye makavauraya nehasha uye hasha dzacho dzakasvika kudenga. 10 Iye zvino mava kuda kuita vanhu veJudha neJerusarema varandakadzi nevarandarume venyu.+ Asi imi hamunawo mhosva pamberi paJehovha Mwari wenyu here? 11 Zvino nditeererei mudzorere nhapwa dzamakatapa kuhama dzenyu, nekuti Jehovha akutsamwirai zvikuru.” 12 Vamwe vakuru vevaEfremu vaiti Azariya mwanakomana waJehohanani, Bherekiya mwanakomana waMeshiremoti, Jehizkiya mwanakomana waSharumu, naAmasa mwanakomana waHadrai, vakabva vaenda kune vaya vakanga vachibva kuhondo, 13 vakati kwavari: “Musapinza nhapwa muno, nekuti zvichaita kuti tive nemhosva pamberi paJehovha. Zvamuri kuda kuita zvichaita kuti zvivi zvedu nemhosva yedu zviwedzere, nekuti mhosva yedu yakatokura nechekare, uye Israeri akatsamwirwa chaizvo.” 14 Saka mauto acho aiva nezvombo akapa machinda neungano yese nhapwa dzacho nezvavakanga vapamba.+ 15 Varume vakanga vasarudzwa nemazita vakabva vasimuka vakatora nhapwa dzacho vakapa vese vakanga vasina kupfeka vaiva pakati pavo zvipfeko zvavakatora pazvinhu zvainge zvapambwa. Saka vakavapa zvipfeko, shangu, zvekudya nezvekunwa, nemafuta ekuzora. Vakatakurawo vakanga vasina simba pamadhongi vakaenda navo kuhama dzavo kuJeriko, guta remichindwe. Pashure paizvozvo vakadzokera kuSamariya. 16 Panguva iyoyo Mambo Ahazi akakumbira madzimambo eAsiriya kuti amubatsire.+ 17 VaEdhomu vakapindazve nechisimba vakarwisa Judha, vakatora nhapwa. 18 VaFiristiya+ vakarwisawo maguta emuShefera+ neekuNegebhu yeJudha, vakatora Bheti-shemeshi,+ Aijaroni,+ Gedheroti, Soko nemaguta madiki aiva akaipoteredza, Timna+ nemaguta madiki aiva akaipoteredza, Gimzo nemaguta madiki aiva akaipoteredza; uye vakagara imomo. 19 Jehovha akaninipisa Judha nemhaka yaMambo Ahazi weIsraeri, nekuti akanga arega vanhu veJudha vachingoita madiro, zvikaguma nekusatendeka kukuru kuna Jehovha. 20 Mambo Tirigati-pirineseri+ weAsiriya akazouya akamurwisa, akamutambudza+ pane kuti amusimbise. 21 Nekuti Ahazi akanga atora zvaiva muimba yaJehovha nemuimba yamambo*+ nemudzimba dzemachinda, akazvipa mambo weAsiriya sechipo; asi izvozvo hazvina kumubatsira. 22 Uye panguva yekutambudzika kwake, Mambo Ahazi akatowedzera kusatendeka kuna Jehovha. 23 Akatanga kubayira kuna vanamwari veDhamasiko+ vakanga vamukunda,+ uye akati: “Nekuti vanamwari vemadzimambo eSiriya vari kuvabatsira, ndichabayira kwavari kuti vandibatsire.”+ Asi izvi zvakaita kuti iye nevaIsraeri vese vaparare. 24 Ahazi akaunganidzawo midziyo yeimba yaMwari wechokwadi; akabva atema midziyo yeimba yaMwari wechokwadi+ kuita zvidimbu zvidimbu, akavhara masuo eimba yaJehovha,+ akagadzira atari dzake mumakona ese eJerusarema. 25 Akagadzira nzvimbo dzakakwirira mumaguta ese eJudha dzekukwidzira vamwe vanamwari utsi hwezvibayiro,+ uye akagumbura Jehovha Mwari wemadzitateguru ake. 26 Imwe nhoroondo yake yese, zvese zvaakaita kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, yakanyorwa muBhuku reMadzimambo eJudha neeIsraeri.+ 27 Ahazi akabva azoradzikwa pamwe chete nemadzitateguru ake, uye vakamuviga muguta, imo muJerusarema, nekuti havana kumuisa munzvimbo yemakuva emadzimambo eIsraeri.+ Uye mwanakomana wake Hezekiya akava mambo panzvimbo yake.